အိပ်ပျော်နေပြီး တက္ကသိုလ်ဝင်တန်း စာမေးပွဲဖြေဆိုရန် နောက်ကျကျောင်းသားနှစ်ဦးကို ယာဉ်ထိန်း?? - Yangon Media Group
အိပ်ပျော်နေပြီး တက္ကသိုလ်ဝင်တန်း စာမေးပွဲဖြေဆိုရန် နောက်ကျကျောင်းသားနှစ်ဦးကို ယာဉ်ထိန်း??
ရန်ကုန်၊မတ်၇-တက္ကသိုလ်ဝင်စာ မေးပွဲဒုတိယနေ့ဖြစ်သည့် မတ်၇ ရက်က ညပိုင်းစာကျက်ပြီးအိပ် ပျော်နေ၍ စာမေးပွဲဖြေဆိုရန် နောက်ကျခဲ့သည့် ကျောင်းသား နှစ်ဦးကို ကျောင်းသားများနေ အိမ်သို့ သွားရောက်ခေါ်ယူကာ ဖြေဆိုမည့်ကျောင်းသို့ အချိန်မီပို့ ဆောင်ပေးခဲ့ကြောင်း အမှတ်၂ ယာဉ်ထိန်းရဲတပ်ဖွဲ့ခွဲမှူးရုံးမှ ဒုရဲမှူး ဆန်းထူးကပြောသည်။
”ညဘက်စာကျက်ပြီး အိပ် ပျော်သွားကြတဲ့ ကျောင်းသားနှစ် ယောက်ကို ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့ဝင် တွေက အိမ်အထိဆိုင်ကယ်နဲ့ သွားခေါ်ပြီး ဖြေဆိုရမယ့်ကျောင်း တွေကိုပို့ပေးခဲ့ရပါတယ်။ သူတို့ မလာဘူးဆိုတာကို သူတို့ဖြေဆို မယ့်ကျောင်းက ကျောင်းအုပ်တွေ ဆရာမတွေက ကလေးဘာကြောင့် မလာတာလဲဆိုတာကို စုံစမ်းပြီး ကျောင်းတွေရှေ့ တာဝန်ကျနေတဲ့ ယာဉ်ထိန်းတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကို အကူ အညီတောင်းလို့ အိမ်အထိသွား ခေါ်ပေးခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်” ဟု ¤င်းကပြောသည်။
ဒေါပုံမြို့နယ် အထက-၁စာ စစ်ဌာနတွင် ဖြေဆိုမည့်ကျောင်း သားတစ်ဦးနှင့် အလုံမြို့နယ် အထက-၄ စာစစ်ဌာနတွင်ဖြေဆို မည့် ကျောင်းသားတစ်ဦးတို့ကို နေအိမ်များအထိ ခေါ်ဆောင်ကာ ဖြေဆိုမည့် ကျောင်းများသို့ပို့ ဆောင်ပေးခဲ့ကြခြင်း ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
မတ်၇ရက်၉နာရီ၂ဝမိနစ်ခန့် ကဒေါပုံ အထက-၁ ကျောင်းမှ ကျောင်းသားတစ်ဦး လာရောက်မဖြေသဖြင့် ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ထံဆက်သွယ်ကြည့်ရာကျောင်း သားမှာအိပ်ပျော်နေ၍ နောက်ကျ ကြောင်းသိရှိရသဖြင့်ယင်းကျောင်းသားနေထိုင်ရာ ဒေါပုံမြို့ယမုံနာ ၂ ရပ်ကွက် ကမ်းနားလမ်းသို့ သွား ရောက်ခေါ်ဆောင်ခဲ့ပြီး ကျောင်းသားမှာညပိုင်းစာကျက်၍ အိပ် ပျော်သွားကြောင်း မိဘများအလုပ်သွား၍ တစ်ယောက်ထဲအိပ် ပျော်၍ နောက်ကျခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
အထက-၄အလုံမှ ကျောင်း အုပ်ဆရာမကြီးက ၎င်း စာစစ်ဌာနတွင် ဖြေဆိုမည့်ကျောင်းသား တစ်ဦးသည် စာမေးပွဲဖြေဆိုရန် ၉နာရီ၁ဝမိနစ်ခန့်အထိ ရောက်ရှိလာခြင်းမရှိသဖြင့် ဖုန်းဖြင့်ဆက်သွယ်ရာဆက်သွယ်မှု မရရှိ၍¤င်း နေထိုင်ရာအမှတ် (၈ဝ)၊ ၃လွှာ ဘီ၊ ကွမ်းရွှဲတန်းလမ်း၊ ဈေးကြီးအ နောက်ရပ်ကွက်၊ ကြည့်မြင်တိုင် နေအိမ်သို့သွားခေါ်ပေးရန် အကူအညီတောင်းခဲ့ကြောင်း ထို့ကြောင့် ပျံလွှားဆိုင်ကယ်ဖြင့် သွားခေါ်ခဲ့ရာ နေအိမ်တံခါးပိတ်ထားသဖြင့် တံခါးခေါက်မှသာ မိခင်ဖြစ်သူနှင့် ဖြေဆိုမည့် ကျောင်းသားမှာအိပ် ပျော်နေကြောင်း ကျောင်းသားအား စာမေးပွဲဖြေဆိုရေး မေးမြန်းသည်ကိုဖြေဆိုမည်ဟုဆိုသဖြင့် ဖြေဆိုမည့် ကျောင်းသို့အချိန်မီပို့ ဆောင်ပေးခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းစာမေးပွဲ ပထမ မတ်၆ရက်ကစာမေးပွဲ ဖြေဆိုရန် ကျောင်းမှားရောက်ခဲ့သည့် ကျောင်းသားကျောင်းသူ စုစုပေါင်း သုံးဦးအား စာမေးပွဲအချိန်မီပို့ ဆောင်ပေးခဲ့ရပြီး အချိန်မီပို့ဆောင် ပေးခဲ့သည့် ယာဉ်ထိန်းရဲတပ်ဖွဲ့ဝင် နှစ်ဦးအား ပဲခူးမြို့တွင်ဖြေဆိုနေသည့် ကျောင်းသား တစ်ဦး၏ဖခင် Wood Htwe Trading ကုမ္ပဏီမှမန်နေဂျင်းဒါရိုက်တာဦးရဲမင်း ထွေးက ဂုဏ်ပြုဆုငွေကျပ် တစ်သိန်း စီချီးမြှင့်ခဲ့သည်။
၂ဝဝ၈ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးပူးပေါင်းကော်မတီအစည်းအဝေး ၃/၂ဝ၁၉၊ ဖွဲ့စည်းပုံ အခန်း(၁
ဘွဲ့ရပြီး အလုပ်ရဖို့ကြိုးစားပေးမည်ဟု နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်
ကျော်စောသတင်း ရရှိနေသောနေရာသို့ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များ ဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးရာ မူးယစ်ဆေးဝါးများနှင်??
မဲဆွယ်တုန်းကဆွယ်ပြီး အခုမှပြန်လှည့်မကြည့်သည်မှာ မသင့်တော်ဟု နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂ